Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo oo Loogu Magacdaray Marxuum C/laahi Yuusuf Axmed | Anti-Tribalism
← Cabdullaahi Yuusuf oo la aasay
Galmudug oo dhaliil usoo jeediyeen Shariifka iyo Faroole →
Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo oo Loogu Magacdaray Marxuum C/laahi Yuusuf Axmed
Gaalkacyo (MMG) Madaxweynaha DKMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa galabta ku dhawaaqay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo loogu magacdaro madaxwyenihii hore ee DKMG Soomaaliya marxuum C/laahi Yuusuf Axmed oo maanta lagu aasay magaalada Gaalkacyo.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa hadal uu ka jeediyey aaska marxuum C/laahi Yuusuf oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in garoonka Gaalkacyo loogu magacdaray “C/laahi Yuusuf Axmed” si loogu xusuusto taariikhdiisa.
Madaxweyne Shariif wuxuu tilmaamay in marxuumka uu ahaa nin ka dhexeeyey dhamaan ummada Soomaaliyeed geeridiisuna ay muujisay sida ay dadka Soomaaliyeed u jeclaayeen Col. C/laahi Yuusuf Axmed.
Garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ayaa noqonaya garoonkii labaad ee loogu magacdaro madaxweyne Soomaaliyeed oo geeriyooday wixii ka dambeeyey 1990-kii. Sanadkii 2007 ayaa dawladii hore ee KMG waxay garoonka Muqdisho ugu magacdartay madaxweynihii ugu horeeyey Soomaaliya Allah ha u naxariistee Aaden Cabdulle Cismaan (Aaden Cadde).